DAAWO: Jose Mourinho Oo Si Cadho Leh Uga Jawaabay In Ander Herrera Uu Saxaafada Ka Hor Qirtay In Isaga Iyo Ciyaartoyda Kooxdiisa United Ayna Lahayn Qalbigii Ay Ku Dagaalmi Lahaayeen. – WWW.Gool24.net
DAAWO: Jose Mourinho Oo Si Cadho Leh Uga Jawaabay In Ander Herrera Uu Saxaafada Ka Hor Qirtay In Isaga Iyo Ciyaartoyda Kooxdiisa United Ayna Lahayn Qalbigii Ay Ku Dagaalmi Lahaayeen.
22/10/2017 Mahamoud Batalaale
Waxaanu hore iidinku soo gudbinay qaabkii layaabka lahaa ee uu Jose Mourinho u amaanay kooxda Huddersfield ee uu ugu haneeyay guushii ay kooxdiisa Manchester United ka gaadheen wuxuuna waliba macalinka ree Portugal si adag u dhaliilay bandhigii kooxdiisa Red Devils oo uu sheegay in guuldaradu ahayd mid ay kooxdiisu u qalantay kadib bandhig xun oo ay kala soo muuqdeen kulankii xalay.
Laakiin Jose Mourinho ayaa sidoo kale ka cadhooday hadal uu Ander Herrera saxaafada ka hor sheegay markii uu soo dhamaaday kulankii Huddersfield. Mourinho ayay layaab ku noqotay markii uu maqlay Ander Herrera oo saxaafada u sheegaya in isaga iyo ciyaartoyda kooxdiisa Man United ayna lahayn qalbigii ay ku dagaalmi lahaayeen.
Jose Mourinho ayaa sheegay in mar haddiiba uu ciyaartoy kooxdiisa ka tirsani hadalkan oo kale uu sheegay in aanu isagu sharixi karin oo loo baahan yahay in dhamaan ciyaartoyda Manchster United ay saxaafada hal mar ka soo muuqaaan oo ay qabtaan shir jaraa’id oo ay arintan ku sharaxayaan.
Sida qaybta danbe ee muuqaalka hoose aad ku daawan karto waxa uu Mourinho ka xumaaday hadalka xidiga ree Spain ee Herrera wuxuuna yidhi: “Waxaan maqlay Ander Herrera oo waraysigii ku sheegaya in maskaxda iyo rabitaanku uu ahaa mid liitay. Yaa Illaahii!- marka uu ciyaartoy taas sheego, waxaan filayaa in ay dhamaantood waajib ku tahay in ay yimaadaan shir jaraa’id sababtoo ah anigu taas ma sharixi karo”.
Mourinho oo hadalkiisa ku celceliyay in kooxda Huddersfield ay qabtay waxa uu isagu jecel yahay ee uu ciyaartoydiisa ka doonayay wuxuuna yidhi: “Huddersfield waxay ku ciyaartay wax walba oo haysteen, sida aan anigu jecelahay iyo sida ay tahay in ay ahaato, waxay iyagu ku ciyaareen wax walba, weerar, tabitaan, dhiiro galin, nafhurid, anagu maanu samayn”.
Mourinho ayaan ka gaban inuu go’aamiyo wixii dhacay wuxuuna yidhi: “Si sahlan kooxda ciyaartoy kulankii noloshooda ayaa u qalantay in ay guulaysato”. Mourinho ayaa la waydiiyay in guuldaradani ay ahayd mid layaableh wuxuuna qiray in ay ahayd mid layaableh balse ay tahay wax waaqici ah oo kooxdiisu ay la kulantay.
Halkan ka daawo muuqaalka falcelintii Mourinho ee kadib guuldaradii Huddersfield gaar ahaan hadalkii Ander Herrera.